चम्सुरीले मेरीबास्सै खेलेरै यति ठुलो घर बनाइन्, घर पुग्दा देखियो १६ बर्षे जवानीको तस्बिर ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
चम्सुरीले मेरीबास्सै खेलेरै यति ठुलो घर बनाइन्, घर पुग्दा देखियो १६ बर्षे जवानीको तस्बिर ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
January 2, 2021 AdminLeaveaComment on चम्सुरीले मेरीबास्सै खेलेरै यति ठुलो घर बनाइन्, घर पुग्दा देखियो १६ बर्षे जवानीको तस्बिर ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नेपाली टिभी सिरियलमा संभवत सबै भन्दा चर्चित हुनु पर्छ ‘मेरी बास्सै’ । उक्त सिरियल मात्र चर्चित छैन त्यहाँ अभिनय गर्ने प्राय जसो कलाकारहरु पनि निक्कै चर्चित नै छन ।
मेरी बास्सैमा खेल्ने कलाकार मध्य एक हुन् पल्पसा डंगोल अर्थात चम्सुरी । उनलाई प्रायले चम्सुरी भनेर मात्र चिन्ने गरेका छन् । तर उनको वास्तविक नाम हो पल्पसा डंगोल । उनले अभिनय गरेको दशकौ भैसकेको छ । कलाकारीताबाट उनले आफ्नो पहिचान मात्र बनाइनन आफ्नो जीवन पनि सुधारेकी छन ।उनी चम्सुरीको घर पुगेर गरिएको कुराकानी हेर्नुहोसः
यो पनि हेर्नुहोस्ः गायिका ज्योती मगरले कलाकारिताबाटै काठमाडौंमा ठड्याइन् यत्ती ठुलो महल, त्यहाँ पुग्दा खुल्यो धेरै कुरा (भिडियो) ! चर्चित गायिका ज्योती मगरले आफ्नै परिश्रमले काठमाडौँमा घर बनाएकी छन । सन् २००६ सालमा काठमाडौँ छिरेकी उनले २०१९ सालमा एउटा घर र अर्को ठाउँ घडेरी समेत जोडी सकेकी छिन । तर यति कमाई गर्न उनले धेरै दुख गरेको उनि बताउछिन ।
गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चामा आइरहने कलाकार हुन् । स्टेज प्रस्तुति, कपडा पहिराई, विभिन्न प्रकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनी गीत गाउँदा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छिन् । खुलेका पहिरन त उनको विशेषता नै हो ।
उनी समय समयमा सामाजिक संजालमा हट फोटो राखेर पनि चर्चामा आउँछिन् । विशेषगरि, माथिल्लो भाग अत्याधिक खुलेको तस्बिर राख्दै ज्योतीले फ्यानको ध्यान आकर्षित गर्न खोज्छिन् । उनी सार्वजनिक रुपमा निकै चर्चामा रहेपछि उनको नीजि जीवनबारे धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । उनको नीजि जीवनबारे जान्ने इच्छा हुनु पनि स्वभाविक हो । उनको घर पुग्दाको दृश्य तल भिडियो हेर्नुहोस :
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् : पौष १९ गते आईतबारदेखी पौष २५ गते शनिबारसम्मको
प्रेम विवाह भएको ४ महिनामै १६ बर्षिय युवतीलाई श्रीमानको निर्मम कु’टपि’ट, ३ महिने सुइ लगाएर यस्तो अ’त्याचार गरेको युवतीको मिडियामा खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को आजको ताजा एपिसोड हेर्नुहोस, कोच दिपको ठाउमा आए गायक राजेश पायल राई ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)